Positive Living Xhosa Zithulele.docx [PDF]
2015 • 94 Pages • 2.39 MB • English
Posted April 14, 2020 • Uploaded by torrance38
Summary of Positive Living Xhosa Zithulele.docx
Phila Ngokuqinisekileyo Igama:
Qiniseka Ngokuphila Wamkelekile “kwindlela yokuphila ngokuqinisekileyo” le yincwadi yokusebenza eyenzelwe ukuba isetyenziswe kwixesha leveki ezintandathu ijonge ukunceda abantu baphuhlise ubuchule bokwazi ukuzilawula xa uphila nentsholongwane kagawulayo nogawulayo (HIV/AIDS). Esi sifundo asenzelwanga ukuba uhlale, ufunde okanye umamele nje kuphela. Ukuze ufunde okuninzi kwesi sifundo uyacelwa ukuba wabelane ngolwazi onalo, kuza kufuneka ube nenjongo ozakwabelana ngazo nabanye kwaye uthabathe inxaxheba nasemidlalweni. Le ncwadi ayithathi ndawo yalo naliphi unyango obucetyiswe ngalo ukunyanga isimo sakho sempilo. Uyakuzuza lukhulu kulencwadi ngokuthi uzinikele ubekhona okanye uphumelele kumhlangano ngamnye wezi zifundo. Ingcaphephe kwezophando zisixelela ukuba ezi zifundo ziluncedo kakhulu kubantu abaphila nezifo ezinganyangekiyo ezifana nesifo seswekile, amathambo kunye nentsholngwane kagawulayo nogawulayo. Ukuze uncedakale kwezi zifundo ukusebenzisa lencwadi rhoqo kwiveki ezintandathu kwaye nokuthatha-inxaxheba kwimidlalo kubalulekile. Uyakuzuza lukhulu kule ncwadi ukuba uye wazinikezela ngokuthi ubekhona kuyo yonke imihlangano ezakuthatha iveki ezithandathu. Ingcali zophando zisixelela ukuba ezi zifundo ziluncedo kakhulu kubantu abaphila nezifo ezinganyangekiyo ezifana neswekile, isifo samathambo kunye nentsholongwane kagawulayo nogawulayo. Kodwa ukuze uzuze lukhulu kwezi zifundo, ukusebenzisa lencwadi yonke imihla kwaye uthathe inxaxheba kwimidlalo ezakuqhuba iveki ezintandathu kubalulekile. Le ncwadi yahlulwe yanamacandelo amathandathu: 1. Iveki 1: Ukulawula isiqu kunye nomthambo 2. Iveki 2: Ukulawula impawu eziqhelekileyo zentsholongwane kagawulayo nogawulayo 3. Iveki 3: Ukulawula uxinzelelo 4. Iveki 4: Ingqaqambo 5. Iveki 5: Ukutya ngendlela elungileyo 6. Iveki 6: Ukuqhubeka njengomlawuli- siqu ophumeleleyo Umkhokeli wenu kwezi zifundo ngu _____________________________ ufumene uqeqesho ngalo lonke ulwazi eniza kulifunda. Uqeqeshwe yifisiyotherapisti enobuchule ngentsholongwane kagawulayo nogawulayo ngendlela ekhuselekileyo yokuzilolonga kunye nobugcisa ngokuphumla. Phila Ngokuqinisekileyo	1
Iveki 1: Ukuzilawula Ngesiqu Nokuzilolonga Sithetha ukuthini ngalentetho “ukuzilawula ngesiqu”? Ukulawula isiqu sakho akuthethi ukuthi kulindeleke ukuba ujonge impilo yakho ngokwakho ngaphandle koncedo. Umntu onempumelelo ngokuziphatha uthatha uxanduva ngempilo yakhe. Lonto ithetha ukuthi bakhetha ukusebenzisana neqela lezempilo, amayeza abo kunye nesiqu sakhe ukuze uphile impilo entle (njengomphathi wezoshishino- abenzi yonke into ngokwabo, basebenza bengamaqela). Zininzi izinto onokufunda ukuzenza ezizakuthi zikuncede ube ngumlawuli- siqu ophumeleleyo. Okokuqala kubalulekile ube nolwazi ngentsholongwane kagawulayo nogawulayo. Kufuneka ube nokuyiqonda intsholongwane kunye nesifo sayo, nendlela eyasuselela ngayo, ukuba ingakuchaphazela njani kunye namayeza asetyenziselwa ukuyithomalalisa okanye ukuyinceda. Inqanaba elilandelayo ngokuzilawula ngobuqu kukuba ukwazi ukucinga ngalemfundiso nangendlela ochaphazeleka ngayo. Inqanaba lokugqibela ngokuzilawula ngobuqu kufuneka ucinge ukuba ingaba yintoni le unokukwazi ukuyenza, yenza isigqibo sokuba uzakuyenza njani, uyifunde njani kwaye uziqhelanise nobuchule obufunekayo ukuze ukwazi ukuyenza. Ezinye zezinto ozakuthi uzifunde kwaye uziqhelanise nazo yonke imihla xa usenza ezi zifundo ziquka umthambo, ubugcisa bokuphumla kunye nendlela esempilweni yokutya. Xa usebenzisa lencwadana uyakufunda ngokuzilolonga neziphumo zokuzilolonga, kwicandelo lesibini kwezi zifundo, uyakufunda kancinane ngempawu zentsholongwane kagawulayo kunye nogawulayo nokuba ungamlawula njani. Icandelo lesithathu lizakujongana nokulawula uxinzelelo, icandelo lokugqibela lijongane nengqaqambo kunye nendlela yokutya kakuhle. Abanye abantu abazakusebenzisa le ncwadi kusenokwenzeka sebenolwazi malunga nezi zihloko abanye kusenokwenzeka banolwazi oluncinane. Kubalulekile ukwabelana ngolwazi ukuze siqiniseke ukuba wonke ubani unolwazo olufunekayo ukuze akwazi ukuzilawula ngobuqu, nokuba ucinga unolwazi oluninzi malunga nezi zihloko, kubalulekile ukuba uyifunde lencwadana ukuqiniseka ukuba akukho lwazi likuphosayo. Ingcaphephe zophando zisixelela ukuba abantu abanolwazi ngempilo yabo bazilawula ngcono kwaye banohlobo lobomi olubhetele. Xa usebenzisa lencwadi kwakhona uyakuthi ufunde kwaye uxoxe ngamaqanaba afunekayo ukuze ukwazi ukuba ngumlawula- siqu ophumeleleyo. Masijonge lamanqanaba: Phila Ngokuqinisekileyo	2
Amanqanaba Okuzilawula Ngobuqu Inqabana Lokuqala: Ukuze uphumelele xa uzilawula ngobuqu kufuneka ufunde kwaye uziqhelise nezinye indlela zobuchule oyakuthi uzenze njengoko izifundo ziqhuba. Kwinqabana lokuqala kukuthi wenze isigqibo sokuba ingaba ufuna ntoni le uzakukwazi ukuyenza. Eli ingaba lelona nqanaba linobunzima ukucinga ngalo. Umzekelo ungaziva ukhathazeke kakhulu okanye unoxinzelelo. Okokuqala kufuneka ucinge ukuba kutheni uvakalelwa ngoluhlobo. Mhlawumbi unobangela wokuba uvakalelwe ngoluhlobo kungokuba awusahlangani okanye awusibonani nabahlobo okanye itshomi zakho. Inqanaba lakho lokuqala usenokugqiba ngelokuba ufuna ukudibana nabantu ukwenza ubuhlobo. Lendlela iyakukwenza uzive bhetele kwintlungu okanye kuxinzelelo oluvayo. Bhala phantsi izinto zibentathu ocinga ukuba ungakwazi ukuzenza. 1) 2) 3) Inqanaba Lesibini: Kodwa ukwenza isigqibo sokuba uzakuhlangana nabantu wenze ubuhlobo akuthethi kuthi lonto izakwenza. Kufuneka uzame ukuba yenzeke. Kwinqanaba lesibini, lokuzilawula ngesiqu kufuneka wenze isigqibo sokuba uzakwenza njani. Ngamanye amaxesha ukucinga ngokuqala into entsha isenokubonakala njengento enzima kwaye singaqali nokuzama. Ukuba ufuna ukuhlangana nabantu ukwenza ubuhlobo kufuneka ucinge ngendlela zonke ozakwenza ngazo. Umzekelo ungamema abamelwane bakho baze kuphunga iti, okanye usenokuqonda ukuba ufuna ukuhlangana nabantu ngokuthi uye ecaweni, ngokungenela iqela elinxasanayo okanye iqela lezomthambo. Ungafane ucinge ukuba lento ufuna ukuyenza ayizukuphumelela. Jonga ezinye indlela ngalo lonke ixesha, kwaye uzijonge ngazo zonke indlela. Bhala phantsi indlela zibentathu ezahlukeneyo onokuzizama ukuphumeza lento ufuna ukuyenza: 1) 2) 3) Phila Ngokuqinisekileyo	3
Ngoku sele usenzile isigqibo sokuba uzakuzama njani ukuphumeza lento ufuna ukuyenza, kufuneka ucwangcise ukuba uzakuyenza njani. Kubalulekile ukuthi kanti isicwangciso sizakusebenza ngapha koko kusenokwenza ungaphumeleli. Ingaba uzakuyenza njani lento? • Okokuqala yenza isigqibo sokuba uzakwenza ntoni kuleveki. • Yenza isicwangciso seyona nto uzakuyenza Ukuba uthi kuleveki uzakuzama ukuya kudibana nabantu ayisosicwangciso seyona nto ecacileyo. Esona sicwangciso sicacileyo masibe nendidi zamalungu angala: • Yintoni? Yintoni kanye le uzakuyenza? Umzekelo usenokugqiba kwelokuba ukuhlangana nabantu uzakumema abamelwane bazokuphunga iti. • Kangakanani? Emva koko kufuneka wenze isigqibo sokuba uzakwenza kangakanani. Umzekelo ingaba uzakubiza ummelwane abemnye aze kuphunga iti okanye uzakubiza iqela labamelwane. Abantu abaninzi bayadina kunomntu omnye. Okanye ingaba ufuna ukubiza abamelwane baze kutya isidlo sasemini? Kodwa isidlo sasemini, lonto ithetha ukuthi sifuna ukulungiswa kwaye eloxesha lokusenza lakukwenza udinwe ngakumbi. Ngako oko kufuneka isigqibo sokuba ungayenza kangakanani. • Uzakuyenza nini? Emva koko kufuneka wenze isigqibo ngosuku olulodwa ozakuwenza ngalo mdlalo, iyakube ingubani ixesha lomini. Mhlawumbi kungabhetele ukubiza ummelwane wakho aze kuphunga iti ngexesha lakusasa ngoba ungabe sele udiniwe emva kwemini. Okanye ukuba uye uzive ungaphilanga kusasa ngenxa yamayeza owasebenzisayo mhlawumbi kungabhetele ukumbizela kwiti ummelwane wakho emva kwemini. Mhlawumbi ummelwane wakho uyaphangela, ungambiza azekufumana iti ngempelaveki. • Kangaphi Le yeyona ndima inobunzima. Sonke siyathanda ukufuna ukwenza izinto ezininzi ngosuku. Kodwa singabantu kwaye izinto azisoloko zisenzeka ngokwezicwangciso. Xa abantu beqala ukufuna ukwenza ezomthambo, sisoloko sisithi sizakuwenza ntsuku zonke. Kodwa lonto ayisoloko isenzeka njalo, ukuba siye saphosa usuku siye sizive singenampumelelo kwaye sityhafe. Ingaba uzakubamema kangaphi abamelwane bakho Phila Ngokuqinisekileyo	4
ukuzakuphunga iti? Hayi ntsuku zonke, mhlawumbi kanye evekini. Uyazi anizukusuka nibe nobuhlobo kwangoko kwaye lonto izakuthatha ixesha. • Ingaba sisicwangciso esilungileyo na? Ukuze wazi ukuba ingaba wenze isicwangciso esilu ngileyo kufuneka uzibuze lombuzo. “Ukuba ndizinike amanqaku ukusuka ku-0 ukuya ku-10 ngokuba ndinethemba kangakanani ngokuphumeza isicwangciso sam kule veki, u-0 kuxa ungenathemba kwaphela, u-10 kuxa unethemba ngokupheleleyo. Ngubani inqaku endizakuzinika lona ukubonakalisa ukuba ndizithembe kangakanani ukuba ndingayenza lento?” Ukuba uzinika u-7 nangaphezulu ko-10 kusenokwenzeka sisicwangciso esihle eso. Ukuba uzinika ngaphantsi ko-7 kufuneka ucinge ukuba kutheni ungenathemba. Yintoni ingxaki okanye umqobo? Ndingasitshintsha isicwangciso okanye ndilungise ingxaki ukuze ndibenethemba ngakumbi? Inqanaba Lesithathu: Ngoku, bhala isicwangciso sakho phantsi kwaye usibeke apho uzakusoloko usibona ntsuku zonke. Ngemva kulencwadi kukho indlela eziyi7 zesicwangciso sokwenza. Zisebenzise yonke imihla usenza ezizifundo. Usenokwenza ezinye indlela ukuziqhuba usebenza ngokwesicwangciso sakho sexesha elizayo. Isicwangciso sokwenza esilungileyo nasi: • Into endifuna ukuyenza • Into endilindele ukuyenza kule veki • Ingaba sicacile • Phendula le mibuzo: - Yintoni - Kangakanani? - Nini? - Kangaphi? Ndinethemba kangangokuba noko ndingamfumana u7 ku 10 Phila Ngokuqinisekileyo	5
Ngoku kufuneka usebenzise isicwangciso nkqubo sakho. Ukuba sisicwangciso esihle ukusisebenzisa kuya kubalula. Kuyanceda ukuxelela usapho nabahlobo ukuba yintoni isicwangciso sakho kwaye ubuye ubaxelele ukuba uqhube njani. Kwezi zifundo uzakwenza isicwangciso veki nganye kwaye ubuye unike ingxelo yokuba uqhuba kanjani. Kuyanceda ukubuya unike ingxelo kuba lonto iyakukunceda ekubeni wazi ukuba uqhuba njani. Ukuba awukwazi kuqhuba ngokwesicwangciso usenokuthetha ngengxaki onazo kwaye uzame necebo lokumelana nezo ngxaki. Inqanaba Lesine: Hlala ujonge iziphumo zakho kwaye uzinike umvuzo ngokuphumelela isicwangciso sakho. Kwakhona hlala ucinga ukuba uziva njani ngokuphumeza isicwangciso sakho. Kumzekelo ebesithethe ngayo, usenokuzincoma ngokumemela abamelwane bakho kwiti, usenokucinga ngokuba uziva njani ngoku. Ingaba isicwangciso sakho sikuncedile waphumeza lento ubuyifuna? Uzathini ngengxaki? Uzakuthini ukuba ngaba isicwangciso sakho asisebenzanga? Uzakunikezela, uzakugqiba ekubeni unesicwangciso esibi? Nazi indlela eziyi7 zokusombulula ingxaki zakho: 1. Yenza isigqibo ngokuba yintoni ingxaki (ukuzinceda koku uzakudinga abahlobo nosapho). 2. Dwelisa okanye yenza uluhlu lwengcebiso ukusomblula ingxaki 3. Khetha imbono ibenye ukuzama 4. Iqhuba njani? 5. Ukuba ngaba ayisebenzi zama enye imbono. 6. Ukuba ngaba imbono zakho azisebenzi, cela umhlobo, usapho, ikhansila okanye abanobugcisa ngengcebiso. 7. Ekugqibeleni kufuneka uyamkele into yokuba awunakuyisombulula ngoku le ngxaki. Phila Ngokuqinisekileyo	6
Umlawuli siqu ophumeleleyo ngumntu: • Onenjongo • Owenza uluhlu lwendlela azakuphumeza ngazo ezonjongo. • Owenza isicwangciso nkqubo sokuphumeza ezonjongo • Aqhubeke nesicwangciso nkqubo • Ajonge inkqubela phambili veki zonke. • Ozakusitshintsha isicwangciso nkqubo xa kukho ingxaki • Azinike umvuzo ngokuphumeza injongo zakhe. Ekugqibeleni kwecandelo ngalinye ngemva kule ncwadi kukho “Amaxwebhu esicwangciso sokwenza”. Sebenzisa lamaxwebhu ukucwangcisa ukuba ingaba ufuna ukwenza ntoni kwaye uza kuyenza njani lonto. Ngoku siza kuthetha ngomthambo- sebenzisa “Ixwebhu lokucwangcisa nokwenza” ekugqibeleni kweli candelo ukucwangcisa ukuba ingaba loluphi uhlobo lomthambo oza kulenza kule veki. Phila Ngokuqinisekileyo	7
Umthambo Umthambo yeyona ndlela ndlela ibalulekileyo ukukugcia usempilweni. Inzululwazi ngezophando zithi umthambo uneziphumo ezininzi ezilungileyo okanye ezihle kwimizimba yethu ezifana nokuncedisa kwindlela yethu yokwetyisa, ukufunxa kunye nokuhambisa ukutya, ziqhelisa intliziyo zethu ukuze zomelele, zibesempilweni kwaye zigcine amaphaphu ethu esebenza kakuhle. Umthambo wenza izintlunu namathambo ethu omelele kunye namalungu ethambile ukuze sibe nokuhamba. Umthambo usenza sizive sonwabile, uphuhlisa ukuzinza kwengqondo kunye nezinga lokukhumbula, uphucula indlela yokulala kwaye umthambo unceda ukunciphisa amathuba okuba nezigulo ezingapheliyo ezifana noxinzelelo lwegazi kunye nomhlaza. Kwiminyaka edlulileyo, xa abantu begula zizifo ezinganyangekiyo ezifana noxinzelelo lwegazi, iswekile okanye intsholongwane kagawulayo nogawulayo, abakhathaleli bezempilo bajonga ekuncedeni abo bantu xa impawu zokugula zisiya zisiba nobunzima. Unyango lujongana nokusebenzisa amayeza kuphela kwaye abantu babecetyiswa ukuba baphumle okanye banciphise imisebenzi yabo. Namhlanje siyazi ukuba sifundisa abantu abanezigulo ezinganyangekiyo ngezigulo zabo kwaye sibakhuthaze ukuba benze umthambo, singakhusela ingxaki ezininzi ebezikade zinganyangwa ngamayeza. Kwakhona siyazi ukuba umthambo ukunceda ukunyanga impawu ezininzi eziye zibe kubantu abaphila nezifo ezinganyangekiyo. Impawu ezo ezinokubangelwa sisigulo okanye ngamayeza asetyenziswa ukunyanga isigulo eso. Usenokuba ufuna ukuqonda ukuba ingaba kukhuselekile na kuwe ukwenza umthambo xa unesigulo esifana nentsholongwane kagawulayo nogawulayo. Uphando lusixelela ukuba kukhuselekile ukuba abantu abaphila nentsholongwane kagawulayo bawenze umthambo. Awukhuselekanga nje kuphela, ukwavuselela isikhuseli- mzimba (immune system), uphucula ukunyamezela kwaye unciphisa ukudinwa, uphucule amandla kwaye unciphise amafutha emzimbeni. Kwakhona siyazi imithambo eyomelezayo ibonakala inceda, okanye inciphisa i- lipodsytrophy kubantu abasebenzisa iARV’s. Siyazi ukuba kubantu abaphile ngokwasemzimbeni bafunyanwa yingqele bathathe intsukwana ezimbalwa bengaphangeli ngenxa yokugula. Enye indlela oluncedo ngayo umthambo kukuba xa uzilolonga ngalo lonke ixesha uziva ukwazi kakhulu ukulawula ubomi bakho. Nangona umthambo iyinto ekulungileyo kwaye ukhusekile ukuba ungawenza, ngamanye amaxesha umzimba wakho uzakuxelela ukuba ngoku kufuneka uyeke ukwenza umthambo. Ukuba unomkhuhlane, uziva unesiyezi, uyagabha okanye unesisu esihambisayo, udunjelwa ngamalungu ngokukhawulezileyo okanye uqalwa zintlungu kwaye awuqinisekanga ukuba zibangelwa yintoni, kubhetele ungayikwenza umthambo de uthethe nonesi okanye ugqirha. Phila Ngokuqinisekileyo	8
communal living as missionary method
2013 • 120 Pages • 2.82 MB
Perceptions of people living in the catchment area of Madwaleni Hospital, South Africa regarding
2010 • 178 Pages • 2.27 MB
Perceptions of people living in the catchment area of Madwaleni Hospital, South Africa regarding ...
the quality of life of adolescents living with early childhood hiv-infection on highly active ...
2014 • 210 Pages • 2.38 MB
an ethnography of adults living with aphasia in khayelitsha
2010 • 310 Pages • 2.6 MB
2013 • 55 Pages • 37.49 MB
2006 • 147 Pages • 960 KB